Umkhiqizi wesitolo seRobhothi Teapresso Ohamba Phambili Okuzenzakalelayo Nefektri | I-Moton
Inombolo yemodeli: I-MTD021A
Isitolo se-robot teapresso i-MTD021A ifakwe ikakhulukazi ingalo yerobhothi esebenzisanayo yasekhaya, umshini wetiye, umshini wokugaya amaqabunga etiye. Kudingeka amanzi ampompi kanye nezindawo zokudonsa amanzi. Ukugcwalisa kabusha impahla kungaba nganoma yisiphi isikhathi, okuncike ekusetshenzisweni kwangempela endaweni.
Imisebenzi ye-robot teapresso shop MTD021A
• Uku-oda kwesikrini sokuthinta kusayithi.
• Ukwenza itiye kusetshenziswa ingalo yerobhothi esebenzisanayo ngokuzenzakalelayo.
• Ukusebenzelana kombono kufaka phakathi ukukhanya nesikrini sokuthinta.
• Thenga i-Teapresso ye-hardware yangaphakathi yesimo sokuqapha ngesikhathi sangempela kanye ne-alamu yamaphutha.
• Uhlelo lokuphatha lwangemuva olusekelwe ku-Android.
• Isibonisi sesikhathi sangempela sezinto ezibonakalayo nesikhumbuzi sesengezo sezinto ezibonakalayo
• Ukuhlaziywa kwedatha yokusetshenziswa kanye nokuthekelisa
• Ukuphathwa komsebenzisi nokuphathwa koku-oda.
• Wechat pay kanye Alipay
Amapharamitha wesiteshi sangaphandle setiye ubisi irobhothi
Amandla kagesi 220V 1AC 50Hz
Amandla afakiwe 10kw
Ubukhulu (WxHxD) 1800x1500x1500mm
Indawo yohlelo lokusebenza Ngasendlini
Isikhathi sokwenza isiphuzo esimaphakathi 50 imizuzwana
Izinkomishi eziphezulu (ukuphakelwa kwezinto ngesikhathi esisodwa) 100 izinkomishi
Indlela yokukhokha I-WeChat ikhokha futhi u-Ali uyakhokha
● Ukusebenza okungenamuntu
● Izindleko zokunakekela eziphansi
● Izindleko zokusebenza eziphansi
● Ukuthunyelwa okuvumelana nezimo
● Ukufakwa kalula nokuthutha
● Izimo eziningi ezisebenzayo
● Izinambitheka eziningi zetiye
● Indawo encane ehlala abantu
Okwedlule: Isitolo Setiye Semfashini Yerobhothi Entsha Yezimo Zesicelo Sangaphakathi
Olandelayo: Imfashini kanye ne-Elular Ordering Robot Receptionist
Gxila ekunikezeni izixazululo zerobhothi ezishintshayo.